EU Yoshushikana neHurutungamiri hweNyika yeZimbabwe
Gumiguru 14, 2016
VaPhillipe Van Damme mumiriri weEuropean Union muZimbabwe
Mumiriri wenyika dzemuEurope muZimbabwe,VaPhillipe Van Damme vanoti nyaya dzehuwori dziri kubuda mumapenhau munyika pamwe nekutadza kuita shanduko munyaya dzehupfumi sezvakabvumiranwa kumusangano wakaitwa kuLima, Peru gore rapera zviri kupa chimiro chakaipa kunyika pamwe nekutadzisa vekunze kuzotanga mabhizimizi muZimbabwe.
Vachitaura pachirongwa chekucherechedza makore maviri vatanga basa muZimbabwe change chakarongwa neve263 Chat muHarare nemusi weChishanu, VaVan Damme vanoti mwedzi mishomanana yapfuura yaona mapepanhau achiburitsa nyaya dzehuwori mumapazi akawanda ehurumende asi pasina vanhu vari kusungwa kana kutora matanho ekuongorora nyaya idzi.
Makukurukota ehurumende anoti VaJonathan Moyo vedzidzo yepamusoro nemutevedzeri wavo VaGodfrey Gandawa vanonzi vakashandisa mari inodarika mazana mana ezviuru zvemadhora zvisina mwero uye kunyange hazvo komisheni inoona nezvehuwori yakada kuvasunga yakarambidzwa kuita izvi nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika,VaPhelekezela Mphoko.
VaMphoko vakaburitsawo muhusungwa kuAvondale muHarare vakuru vakuru vekambani yeZimbabwe National Road Authority vanosanganisira VaDavison Norupiri avo vaipomrewa mhosva yekuba mazana matanhutu ezvuru zvemadhora.
Gurukota rezvemando dzemoto, VaSamuel Undenge varikupomerwawo nyaya dzehuwori vachinzi vakamanikidza kambani yeZESA kupa basa kuna muzvinabhizimisi Wicknell Chivhayo zvechikiribidi.
VaVan Damme vatiwo pasi pechibvumirano cheLima hurumende yainge yavimbisa kubhadhara zvikwereti zvayo kuInternational Monetary Fund nekuWorld Bank mwedzi wapfuura usati waperi asi izvi hazvisati zvaitika.
Vatiwo hurumende yakavimbisa kugadzirisa nyaya dzehuwori asi huwori huri kutowedzera.
Vati zvese izvi zvinoita kuti vekunze vasauye munyika kuzotanga mabhizimisi pamwe nekusimudzira hupfumi.
Vati nyika dzeEU dzicharamba dzichibatsira Zimbabwe munyaya dzenzara, hutano nemabasa ebudiriro asi vakati rutsigiro rwakawanda ruchauya chete kana hurumende yagadzirisa zvayakatidza, kutevedza mutemo pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Svondo rino vemabhizimisi vemuno vaichemachemawo pamusangano weNational Economic Consultative Forum kuti hurumende inongotaura chete nezvekuti iri kutora matanho ekugadzirisa hupfumi asi pasina zvairi kuita.
VaMisheck Gondo vesangano reNational Assocition of Youth Organisations vati maonero aVaVan Damme akafanana nemaonero avo uye zviri pachena kuti hurumende yeZimbabwe iri kutadza kuita zvayakavimbisa.
Mumwewo wechidiki, Thembinkosi Rushwaya uyo akasungwa nguva pfupi yapfuura mushure mekuratizira paUniversity of Zimbabwe pamberi pemutungamiriri wenyika,VaRobert Mugabe audza Studio 7 kuti pachinzvimbo chekugadzirisa zvinhu hurumende iri kuwedzera kuparadza hupfumi pamwe nekushungurudza veruzhinji.
Kunyange hazvo EU yakabvisa zvirango zvehupfumi kuZimbabwe, vakawanda vapinda mumusangano uyu vanoti kutyorwa kwekodzerp dzevanhu kuri kotowezedzera zvichitevera danho rakatorwe neEU.
VaVan Damme vati mukati megore rapfuura sangano iri pamwe nenyiak dzeEU vashandisa mari inodarika zana remamiriyoni emadhora munyaya dzechikafu nehutano.
Vanotiwo mukati menguva imwe cheteyo, nyika idzi dzashandisa mari inodarika mamiriyoni makumi mashanu emadhora mumabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena pamwe nemamwe mabasa ebudiriro.
VaVan Damme vanoti pane mukana mukuru wekuwedzera rubatsiro munyaya dzehupfumi, budiriro nezvimwe kana hurumende yeZimbabwe ikatevedza chitsidzo chayo cheLima pamwe nekutevedza mutemo, kuvandudza mitemo yavo yemabhizimisi pamwe nekurmekedza kodzero dzenhu.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko VaChris Mushowe kuti tinzwe divi rehurumende.